Dambudziko uye Zvemagariro Media | Martech Zone
Nhamo uye Zvemagariro Midhiya
Muvhuro, Zvita 17, 2012 Muvhuro, Zvita 17, 2012 Douglas Karr
Vazhinji venyu hamundizivi ini pachangu, asi ini ndakarererwa muNewtown, Connecticut. Iguta diki rinoshamisa rakakura zvakanyanya asi harina kuchinja zvakanyanya kubva pandakagara imomo. Pandaive mudiki, taifanira kuona mafirimu kuCity Hall, kushanyira Blue Colony Diner kune ice cream, uye kuenda kuSt.Rose yeLima Church maSvondo. Nharaunda yacho yaingozvimiririra… Baba vangu vaive kunyange kubazi rekuzvipira remoto patakagara ipapo. Vakuru vanhu, inoshamisa nharaunda.
Imwe yeshamwari dzemhuri yedu ine mwanakomana ane hupenyu hwakaponeswa munjodzi iyi - tese tiri kuvanamatira ivo nemhuri dzakarasikirwa zvakanyanya muchiitiko ichi chinotyisa.
Kana chimwe chinhu chakadai chikaitika uye chikaisa gakava nezvematongerwo enyika sepfuti, pane njodzi chaiyo inosangana mukukurukura kana kuwedzera maonero ako pamhepo. Nharo dzinogona kukurumidza kuputika nehasha uye kunyange kuvenga kana mumwe munhu aburitsa maonero avo ezvematongerwo enyika sezvo vakawirwa neizvi vasati vaiswa.
Ini ndaida kukanda mamwe matipi andinofunga akakosha kumakambani nevanhu vamwe nevamwe:
runyararo inogona kuva mhinduro yakakodzera. Shamwari yakanaka Chuck Gose yakaratidza kuti iyo NRA yakavhara yavo Facebook peji uye vakarega kumutsiridza yavo Twitter account. Ini handitende kuti pane mhinduro iri nani pane iyo yakapihwa mamiriro acho. Makambani akawandisa anofunga kuti ibasa rePR kuisa chirevo. Ini handibvumirani. Dzimwe nguva chinhu chakanakisa chaungaite kunyarara.
Kugovana yako pfungwa ichavhura iwe kuti urwise. Zvakajeka uye zvakapusa, kuzviisa kune rimwe divi rekupokana kana imwe kunomutsa mhinduro. Kana iwe uine pfungwa yakasimba neimwe nzira kana imwe uye iwe uchizvizivisa - usashamisike kurwiswa pachena, kusekwa, kutsikwa kana kuva nedzimwe pfungwa dzinoshuva dzakakandirwa kumashure. Kugovera zvaunofunga kunoda kukura. Kana iwe usati wakura zvakakwana kuti ubate mhinduro, usazvivhure iwe kurwisa.
hurukuro inogona kubereka. Zvemagariro midhiya zvinopa nzira yekusawirirana nevanhu vachiri vese vane hanya nemhedzisiro. Ndakaona nhaurirano dzinoshamisa pane yechipiri kugadzirisa, kurwara kwepfungwa, nyaya dzehugamba, uye mameseji erudo nekusimbisa mazuva mashoma apfuura.
Waiting ndeimwe nzira. Nepo mhinduro dzemagariro dzichiwanzo shasha kana paine mhinduro nekukasira, zviitiko zvine chekuita nezvematongerwo enyika seizvi zvinogona kuda zano rakasiyana. Ndakamira kuTwitter uye ndikamisa yangu Facebook kubatanidzwa Ini zvakare ndakamirira kutumira izvi kwemazuva akati wandei kuti ndiwane chimwe chinhu chinovaka kutaura pane kungo wedzera pakuputika kwemaonero, nharo uye nharo kunze uko. Kana iwe uchikwanisa kumirira kusvikira vanhu vatonhorere zvishoma, hurukuro yacho inogona kuvaka zvakanyanya.
Zvemagariro venhau ndeye nzira. Iwe hausi kungotaura zvakananga kune mumwe munhu. Iyo nzira yekutaurirana uko meseji yako inoiswa kuruzhinji kuti iongororwe, zvisinei nekwaunotumira. Svikiro rinopa mambure ekuchengetedza kune avo vanoda kuita zvakanaka, uye nhoo yekuhwanda kuseri kweavo vanoda kuita zvakaipa.
Pakaitika kuputika kwemusha kuno kuIndipolis, isu akaona zvese zvakanaka izvo zvemagariro media zvinogona kumutsa. Iyo yakapa svikiro rekutsigira, nhau, kutenda, meseji yetariro uye zvakaguma nerubatsiro rwechokwadi kune avo vanobatanidzwa.
Ndine tariro, kunyangwe paine gakava rezvematongerwo enyika, kuti vezvenhau vanozopedzisira vave simba rezvakanaka mukupodza nharaunda ino Ini ndatoona senge shamwari dzangu kuNewtown dzakashandisa Facebook kugovana zvavanonzwa, kupererwa netariro uye mufaro kuti mwanakomana wavo aive mupenyu. Kunyangwe isu tisingakwanise kuzvibvisa pachedu nema crazies, tinotarisira kuti tinogona kudzidza mashandisiro epakati nenzira yakanaka. Kana dzidza kana usingaishandise zvachose.
Tags: newtownpasocial media nhamo
Piritsi uye Nharembozha Vatengi Mahoridhe Zvirongwa
Ronga, Govana, Shandira pamwe uye Govera Ruzivo rwekugadzira
Zvita 17, 2012 na9: 23 PM
Mashoko makuru Doug! Ndinoyeuka ndichiziva kuti iwe wakakurira muConnecticut asi zvachose hauna kuziva kuti yaive Newtown. Kutenda nekugovana mazano aya nevaverengi vako uye nharaunda dzakazara.
Zvita 17, 2012 na10: 06 PM
Thanks @bnpositive: disqus. Handina kumbofunga kuti chero munhu angazonzwa nezveNewtown, CT. Hazvishamise kuiona ichitumbuka panhau nekuona shamwari dzemhuri yangu dzichitaura nezvazvo sezvazviri kuitika.
Zvita 17, 2012 na11: 01 PM
Imwe njodzi yekudonha muSocial Media hurukuro yenhau dzinosuwisa ndeyekuti inosangana nekushandisa - senge vatori venhau vachirova maikorofoni pachiso chemumwe munhu achangofirwa nemudiwa. Kunyarara kunowanzo kuve kwakakodzera.
Tinogona kunge takanyongana-nemagariro enhau. Kwemaawa mashoma zuva iri takafunga kuti yaive hama. Fungidzira kana vatyairi vari mubhazi iye achipenga tweeting kubva vangadai vakaverenga maTweets - uye kana mupfuri achiri mupenyu. Zvinogona kunge zvakanyanyisa kuipa.
Uye Richard Engel. Ndiri kuona kuti sei NBC yakaisa midhiya kudzima paari kusvika asunungurwa. Kana ikaburitswa chero nekukurumidza ndiani anoziva zvingadai zvakaitika kwaari.
Social Media vanhu vanotanga kupfura chero chinhu chidiki chenyaya yavanonzwa uye vamiriri venhau vanotanga kusvetuka nhanho kuti varambe vachimhanya uye kuti varambe vachimhanya, vachichinjira kukanganwiro-based media senge ivo vegandanga rekushambadzira agency kungo chengetedza kune avo vanovatsigira. Kutsvedza kutsvedza.
Zvinotonyanya kukosha - fara shamwari dzako nemhuri vakapona paRussia roulette vhiri re #Newtown neChishanu. Izvo hazviite kuti mamiriro acho anyanye kunetsa uye haisi chipunu cheshuga kubatsira mushonga kuti udonhe asi zvirinani unogona kutaura nyaya yavo nekukudza avo makumi maviri neshanu (vachifungidzira makumi maviri nemasere vakafa - 27 ane zita rinoda usazombotaurwazve).
Uye kukuziva iwe, bromance, iwe uchavaremekedza ivo muchimiro.
Ndizivisei zvandingaite kuti ndibatsire, kunyanya kana zvichigona kupfuura ne Twitter & Facebook!
- wako mentee
Iri iblog rinodzidzisa kwazvo & ini ndine ruzivo rwakadzidzisa zvikuru kubva kuiyi blog. Ndokumbirawo urambe uchikanda.